Shiinaha Warshadaha Kalluunka Oligopeptide iyo alaableyda | Huayan
Miisaanka Molecular: 500 ~ 1000Dal, 300-500Dal
Feature: Borotiin sare, wax lagudarsado, molecule yar ayaa si fudud loo nuugi karaa.
1.Si wax ku ool ah u xalliso dhibaatada yareynta qoyaanka maqaarka iyo murqaha, ku kabo waqtiga kolajka si maqaarku u noqdo mid da 'yar.
2.Si adag ugu xir kalsiyum unugyada lafaha, lumis ama hoos u dhac la'aan.
3.Ka ilaali kiliyaha inay qoyaan oo daahfuran yihiin, korna u qaado daah furnaanta indhaha.
4.Kordhi xiriirka dhow ee unugyada muruqyada si aad uga dhigto kuwo jilicsan oo dhalaalaya.
5.Xakamee qanjirka 'endocrine', ilaaliyaa oo xoojiya waxqabadka muuqaalka jirka.
6.Waxay kuxirantahay difaaca jirka globulin, kordhinta difaaca jirka.
Awood soo saar joogto ah, tiro macquul ah, si macaamiisha loo siiyo alaab ku filan.
4.Provde adeegyo wakhti-buuxa ah kadib-iibka.
5.Ka soo baxa Jasiiradda Hainan ee caafimaadka leh, dooro waxyaabo caafimaad leh oo u adeeg adduunka.
Shirkaddaadu ma leedahay wax caddeyn ah?
Haa, ISO, HACCP, XALAL, MUI.
2.Waa maxay tirada ugu yar ee dalabkaagu?
Badanaa 1000kg laakiin waa lagu gorgortami karaa.
3.Sidee loo raraa badeecadaha?
J: Shaqo hore ama FOB, haddii aad leedahay u soo diro u gaar ah Shiinaha. B: CFR ama CIF, iwm, haddii aad noo baahato inaan shixnad kuu samayno. C: Fursado badan, waad soo jeedin kartaa.
4.Nooca noocee ah ayaad aqbashaa?
T / T iyo L / C.
5.Waa maxay wax soo saarkaagu waqtiga hogaaminta?
Qiyaastii 7 ilaa 15 maalmood sida ku xusan tirada amarka iyo faahfaahinta wax soo saarka.
6.Ma aqbali kartaa qaabeynta?
Haa, waxaan bixinaa adeegga OEM ama ODM. Cuntada iyo qaybta waxaa loo samayn karaa iyadoo lagaaga baahan yahay.
7.Could ma bixin kartaa shaybaar & muxuu yahay waqtiga dhalmada?
Haa, caadi ahaan waxaan bixin doonnaa shaybaarro bilaash ah oo macaamiisha ah oo aan horay u sameynay, laakiin macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu qaado kharashka xamuulka.
8. Ma waxaad tahay soo saare ama ganacsade?
Waxaan nahay soo saare Shiinaha iyo warshaddeena waxay ku taalaa Hainan.Factory visit is welcome!
Hore: Kalluunka Kalluunka Kalluunka
Xiga: Kalluunka loo yaqaan 'Tilapia Fish Collagen Peptide'